कहिले बन्ला बौद्ध-जोरपाटी सडक, किन हुँदैन ठेकेदारमाथि कारवाही ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
कहिले बन्ला बौद्ध-जोरपाटी सडक, किन हुँदैन ठेकेदारमाथि कारवाही ? (भिडियो)
काठमाडौं । ठूल्ठूला खाल्डा । खाल्डामा जमेको पानी, अनि असारे खेतजस्तो हिलो ! यो चावाहिल–साँखु सडकको यथार्थ हो । खाल्डा–खुल्डी र हिलाम्मे भएपछि सडक वारपार गर्न पनि निकै कठिन हुन्छ । कतिपय गाडी त बीच सडकका खाल्डामै रोकिन्छन् ।
यो वर्षा हुँदाको सडकको अवस्था हो । पानी पर्दा हिलो भएको सडक घाम लाग्दा धुलाम्मे हुन्छ । धुलो पनि सडक नै नदेखिने गरी उड्छ । गएको चार वर्षयता बौद्ध–जोरपाटी–साँखु सडकको अवस्था यस्तै छ ।
– सडक विस्तारको काममा ढिलाई हुँदा सास्ती
सरकारले २०७२ सालमा चावाहिलबाट साँखुसम्म २२ मिटर चौडा चार लेनको सडक बनाउने योजना ल्यायो त्यसै अनुरुप काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सडक चौडा पार्न विभिन्न ठेकेदार कम्पनीमार्फत काम पनि सुरु गर्यो ।
तर, सडकमा काम सुरु गरेको तीनवर्ष भन्दा बढी समय भैसक्दा पनि प्रगति शून्य छ । कुल लम्बाई ११ दशमलव ४६ किलोमिटर सडकखण्ड रहेको चावाहिल–साँखु सडकमा मुआब्जाको विषयमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण लामो समयदेखि काम हुन नसकेको सडक विस्तार आयोजनाको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले विभिन्न चार भागमा गरी छुट्टाछुट्टै ठेकेदार कम्पनीलाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । चार कम्पनीले नसक्ने भएपछि थप एक कम्पनी गरी पाँच ठेकेदार कम्पनीले यो सडकको विस्तार गरिरहेको छ । तर पनि काम भने आधा पनि भएको छैन ।
आयोजना भने म्याद थप्दै बसेको छ । गएको असार ११ गते मात्रै बौद्ध–जोरपाटी सडक विस्तारका लागि एक वर्षको म्याद थप गरिएको छ । बौद्ध– जोरपाटी सडक खण्डको निर्माणका लागि एक वर्षको समय अवधि थप गरेको भए पनि निश्चित समय अवधिमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
– ठेकेदारको चरम लापरवाही
२०७२ सालबाट बिस्तारको प्रक्रिया सुरु गरिएको सो सडक अझै अलपत्र अवस्थामा छ । सडक विस्तारका क्रममा अधिकांश फुटपाथ भत्काइएको छ । जसले गर्दा पैदलयात्रीलाई सडक बीचबाट हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सडकको दुरवस्थाका कारण असन्तुलित हुँदै चलाउनुपर्दा सवारी चालकसमेत अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय बन्दै गरेका फुटपाथसमेतको अवस्था दयनीय छ ।
साँघुरा र मुस्किलले एक जना मात्र हिँड्न मिल्नेदेखि पाइलासमेत अट्न नसक्नेसम्मका पाइएको छ । ठेकेदारको चरम लापरबाही छ तर सरकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा ठेकेदारले सरकारलाई नै चुनौती दिइरहेको पाइएको छ ।
– को हो त ठेकेदार कम्पनी ?
काठमाडांै सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको साढे १२ किलोमिटरको सो सडकखण्डलाई पाँच भागमा विभाजन गरी त्यसको निर्माणका लागि २०७२ सालमै ठेकेदार कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनिर्यस प्रालिले असोज २०७२ मा ३ दशमलव ६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
फागुन २०७५ सम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएका ती कम्पनीले हालसम्म २० प्रतिशत बढी काम गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, बज्रगुरु, च्याङमिला र खानी गरी तीन ठेकेदार कम्पनीले पनि संयुक्त रूपमा पुस २०७५ र २०७६ वैशाख गरी दुई स्थानको सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
दुई दशमलव चार र तीन किलोमिटर गरी कुल पाँच दशमलव चार किलोमिटर सडक निर्माण ठेक्का पाएको ती कम्पनीले पनि हालसम्म ४० प्रतिशत बढी काम गर्न सकेको छैन । त्यस्तै बीटी, सुनकोसी र वल्र्ड वाइड कम्पनीले संयुक्त रूपमा पुससम्ममा निर्माण गर्नेगरी दुई दशमलव ४६० किलोमिटर सडकको जिम्मा पाएकामा हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको छ ।
लामा र समानान्तर गरी दुई कम्पनीले पनि चैत्र २०७५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरीे एक दशमलव शून्य चार किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा २०७४ सालमा पाएको थियो तर यसले समेत हालसम्ममा २५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको छ । यसरी यी कम्पनीले २०७५ पुसदेखि २०७६ वैशाखसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरेका थिए ।
जसअनुसार हालसम्ममा साढे आठ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने वा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडक निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तर, सडकको अवस्थालाई आँकलन गर्ने हो भने समग्रमा २० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसभन्दा बढी काम हुन सकेको देखिँदैन ।